स्काईपी चलाउनेहरु असुरक्षित, भिडियो कल रिसिभ गर्दा गोप्य डाटा खतरामा ! (भिडियोसहित) – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, पुष २५, २०७५११:५६0
पछिल्लो समयमा सबैजसो मानिसहरु इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । स्मार्ट फोनका प्रयोगकर्ताहरुको संख्यामा दिनप्रति दिन रुपमा वृद्धि भएको छ । त्यस्तै विभिन्न एपहरुको प्रयोग पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । प्रविधीमा हाम्रो निर्भरता बढेको कारणले यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षहरु रहेका छन् ।
इन्टनेटको प्रयोगकर्ताले निजी अनलाइन डाटाहरुको सुरक्षित राख्नु ठुलो चुनौतीको बनेको छ । एपहरुको संख्या बढेसगैं धेरैले एपहरुको प्रयोग बढि बढेको छ । असुरक्षित एपहरुको प्रयोगले खतरा उत्पन्न गराउँछ, निकै चर्चित र सुरक्षित मानिएको एपहरुमा पनि प्रयोककर्ताको डाटा पूर्ण रुपमा सुरक्षित देखिदैन् ।
यस्ता एपहरु मध्ये धेरैप्रयोग हुने एक एपको नाम हो, कलिङ्ग स्काइपि एप । यसको प्रयोगकर्ता पनि धेरै छन्, भखरै यहि स्काइपी असुरक्षित भएको घटना सार्वजानिक भएको छ ।
स्काईपीको एन्डो«इट एपको माध्यमबाट स्मार्टफोनलाई अनलक नगरिकन प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत डाटा चोरीको दाबी गरेका छन् ।
एक युरोपेली मुलुक कोशोभोका एकजना साइबर विशेषज्ञले एक भिडियोमार्फत यो कुरा सार्वजानिक गरेका हुन् । उनले स्काइपी कल रिसिभपछि स्मामफोन अनलक नगरिकनै मेसेज पठाउने र ग्यारेली ओपन गर्न सकिने भिडियोमार्फत देखाएका हुन् ।
उक्त भिडियो उनले मानिसहरुलाई सचेत बनाउनको लागी सार्वजानिक गरेका हुन् । भिडियो सार्वजानिक गर्नुभन्दा अगाडी गत अक्टोबरमा माका्रसफ्ट कम्पनीलाई प्रेषित गरेका थिए ।
भिडियो कल रिसिर्भ गर्दा फोनको स्क्रिन आफै अनलग हुने समस्या माइक्रोसफ्टले डिसेम्बर महिना भित्रमा समाधान गर्ने बताइएको छ । (हेनुहोस् भिडियो)
सामाजिक सञ्जालमा भारइल बनेको तस्बिरले मिस नेपाल शृंखला खतिवडा आलोचित
गज्जबको उपाय ! धोका दिने प्रेमिकालाई तह लगाउन युवकले गरे यस्तो अनौठो हर्कत, भिडियो भयो भाइरल
के तपाई काली भएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? अब घरै बसेर यसरी बन्नुहोस गोरी र सुन्दर (भिडियो)
यी हुन् विश्वलाई चकित पार्ने नेपाली इन्जिनियर , जसले ६ कक्षामात्रै पढेर बनाए काठको साइकल (भिडियो)